Kabuki maka oge izizi | Ota Ward Cultural Promotion Association
Kabuki maka oge mbụ
Ememme Ottawa 2022 Pụrụ Iche	Kabuki maka oge mbụ
Ọ dị mfe nghọta Kabuki site na ụmụaka ruo ndị okenye!
Anyị ga-eji nlezianya kọwaa ahụmahụ na ihe ngosi site na iji projector.
Ọ bụ ọdịnaya nke na-enye gị ohere ịnweta ụwa nke Kabuki site n'akụkụ dị iche iche, dị ka ịgagharị (agha mma agha), etemeete, egwu, na ịrụ ọrụ Kabuki.
Satọde, 2022 Maachị 3
13: 30-15: 20 (emepe na 12:45)
Ota Citizen's Plaza Large Hall
Ahụmahụ ọgụ mma agha Kabuki
Ngosipụta etemeete nke "Kumadori"!
Ụlọ ọrụ egwu Kabuki
Rebọchị ntọhapụ: Eprel 2022, 1 (Wednesde) 12: 10-
N'ozuzu 2,500 yen
Ụmụ akwụkwọ sekọndrị na obere 1,000 yen
A ga-anabata ndị na-achọ isonye na ahụmahụ na atụmatụ ngosi na ebe ahụ n'ụbọchị ihe omume ahụ.
Arụmọrụ 1:Mmadụ atọ Yoshisan Tomoe HakunamiSanninki Chisa Tomoe no Shiranami~Okawabata Koshinzuka ebeOkawabata Koshinzukaba
Anyị ga na-eme "Sanjin Yoshisanba Shironami", nke a ma ama maka aha "Ọnwa bụkwa azụ na-acha ọcha ...".Ọ bụ ihe nkiri ama ama ebe ndị ohi atọ nwere otu aha Yoshisaburo na-ezute ma soro ọgọ ha nwoke nwee nkwekọrịta.Ihe kachasị pụta ìhè bụ ahịrị dị ụda iri asaa na ise na ịgagharị n'ụzọ.
Arụmọrụ 2: Gojobashi
Set in Gojobashi, Kyoto, onye ọka iwu siri ike nke nwere naginata, Musashibo Benkei, meriri site na nwata nwoke ọkụ, Ushiwakamaru (mgbe e mesịrị Minamoto no Yoshitsune), na ọ bụ ohu ogologo ndụ.Nke a bụ nchịkọta nke ihe anyị mụtara site na ngosipụta na ahụmahụ a, dị ka ịgagharị, ime kumadori, na ịkpọ Nagauta na Hayashi.
Ahụmahụ: ọgụ mma agha Kabuki (ọgụ mma agha)
Na mgbakwunye na igosi aha Kabuki-kpọmkwem ụdị dị ka "Yamagata," "Dhenki," na "Kasumi," na nkọwa nke onye nkụzi, anyị ga-enye ihe ngosi na ndị sonyere tinyere àgwà song "Dontappo." Ga-amakwa gị aka na ogbo.
Ngosipụta: Ngosipụta etemeete nke "Kumadori"!
"Kumadori" bụ àgwà nke Kabuki etemeete.Anyị ga-enye otu onye so na usoro etemeete ka ọ na-akọwa ya n'ụzọ dị mfe nghọta.Ndị na-ege ntị ga-enwe ike ịhụ etemeete na projector ma kirie ya ozugbo.
Ụlọ ọrụ: egwu Kabuki
Anyị ga-enwe ogbako maka egwu na-acha Kabuki, dị ka iwebata na igosipụta ngwa egwu site na shamisen, ịbụ abụ, na ihe egwu egwu na-egwu n'azụ ihe nkiri.